Fluid Ukulahlekelwa izithasiselo-OBC-G80S - China Tianjin Oilbayer S & T
Fluid Ukulahlekelwa izithasiselo
Lost Ukusakazwa Agents
Spacers kanye ukushiselwa
Drilling lengetiwe Fluid
Anti-sloughing futhi ivimbela wokufaka ejenti
Uwoyela-base imishini uketshezi okufakiwe
HTHP Well ekuqiniseni
Uwoyela-base imishini uketshezi ubuchwepheshe
Umkhiqizo Izindaba & Izimemezelo
Fluid Ukulahlekelwa izithasiselo-OBC-G80S
Lost Ukusakazwa Agents-OBC-B62S
Fluid Ukulahlekelwa izithasiselo-OBC-G75S
Isifinyezo OBC-G80S uhlobo sulfonic uketshezi ukulahlekelwa okufakiwe. It has ezinjengalezi: anti lokushisa eliphezulu, anti-usawoti, okusheshayo ukuthuthukiswa amandla, ambalwa amanzi khulula. Umkhiqizo kuyafaneleka ukuthi kusetshenziswe izinhlobo ezahlukene usimende namanzi. Libuye libe uhlobo ukusetshenziswa komkhiqizo kwandile, okuyinto ingasetshenziswa izinhlobo ezahlukene usimende slurry izinhlelo. OBC-G80S akuyona kuphela esebenzayo angenasawoti usimende slurry, kodwa futhi kusebenza emanzini usawoti usimende slurry. Imisebenzi It kunciphisa uketshezi ukulahlekelwa o ...
OBC-G80S uhlobo sulfonic uketshezi ukulahlekelwa okufakiwe. It has ezinjengalezi: anti lokushisa eliphezulu, anti-usawoti, okusheshayo ukuthuthukiswa amandla, ambalwa amanzi khulula. Umkhiqizo kuyafaneleka ukuthi kusetshenziswe izinhlobo ezahlukene usimende namanzi. Libuye libe uhlobo ukusetshenziswa komkhiqizo kwandile, okuyinto ingasetshenziswa izinhlobo ezahlukene usimende slurry izinhlelo. OBC-G80S akuyona kuphela esebenzayo angenasawoti usimende slurry, kodwa futhi kusebenza emanzini usawoti usimende slurry.
It kunciphisa ukulahlekelwa uketshezi ngokusobala. Ngokuvamile esingaphansi 50ml. Uma okwandisa ngomthamo, ukulahlekelwa uketshezi ngeke esingaphansi 30ml.
Ngempumelelo usawoti ukumelana. Ingasetshenziselwa emanzini usawoti ayegcwele.
Ukuba ugqinsi inyuka isikhathi kancane njengoba lokushisa lenyuka uhla lokushisa 70 kuya kwangu-90 ℃. It ayinalo ithonya endleleni amandla ami angamandla amatshe usimende.
Hhayi nozwelo ngomthamo, kungekho iphuzu nenhlekelele, ukuphepha iyasebenza.
Izinga lokushisa: ≤180 ℃ (BHCT).
Ncoma Isikali: 0.6 ~ 0.8% (BWOC).
Kusebenza e gcwele hlobo of usimende slurry izinhlelo, okuyinto akhiwa ngu zebanga ngalinye lamafutha-kahle usimende (kuchazwe GB10238 noma APISpec10A) nezinye izithasiselo (njengawo Silicon powder, ukuzulazula ubuhlalu, flyash, bentonite, barite ubhuqu hematite).
White noma ukukhanya amandla ophuzi
ukulahlekelwa Fluid (50 ℃, 6.9MPa, 30min), ml
amanzi Mahhala (50 ℃), ml
Ukwakheka kasimende slurry: i-SD "G" usimende 800g, Fresh 352g amanzi, 4.8g OBC-G80S, OBC-X60L 4g.
Zahlanganiswa ngo 25 kg multi-Ply iphepha esakeni waterproof plastic ifilimu ngaphakathi. Noma ngokusekelwe esicelweni amakhasimende '.
Kumele kugcinwe ezindaweni ezipholile, omile futhi umoya futhi ugweme nelanga nemvula.
Impilo: izinyanga 24.
Previous: Fluid Ukulahlekelwa izithasiselo-OBC-G80L
Okulandelayo: Agents-OBC-P62S Esilula
Usimende fluid Ukulahlekelwa lengetiwe
fluid Ukulahlekelwa lengetiwe
fluid Ukulahlekelwa lengetiwe Starch
fluid Ukulahlekelwa Agent izithasiselo Amps
lokushisa High Fluid Ukulahlekelwa lengetiwe
Polymer ekuqiniseni fluid izithasiselo Antifoam Agent
Polymer fluid Ukulahlekelwa lengetiwe
Polymer fluid Loss Control lengetiwe
Fluid Ukulahlekelwa izithasiselo-OBC-G86S